အကောင်းဆုံးအိမ်တွင်းစမ်းသပ်မှု - Ikkaro
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> အိမ်လုပ်စမ်းသပ်ချက်
အိမ်လုပ်စမ်းသပ်မှုများသည်သင်အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုပေါင်းစပ်ခြင်း၏အနုပညာဖြစ်သည် အထူးဆိုင်များသို့သွားရန်မလိုဘဲအိမ်တွင်သို့မဟုတ်စူပါမားကက်တစ်ခုဖြစ်သည် အတည်ပြုသို့မဟုတ်အချို့သောသိပ္ပံနည်းကျဖြစ်ရပ်ဆန်း.
အကယ်၍ ၎င်းသည်ယေဘုယျဘလော့ဂ်တစ်ခုဖြစ်ပါကအိမ်တွင်းစမ်းသပ်မှုများသည်လွှမ်းခြုံလိမ့်မည် DIY, ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်အမျိုးမျိုးသော၏တီထွင်မှုလုပ်ပါ, အီလက်ထရွန်းနစ်အပါအဝင်ယန္တရားများ၏ဖော်ပြချက်။ Ikkaro, အဖြစ်အာရုံစိုက်အဖြစ်အရပျ၌အဘယ်မှာရှိ အရာအားလုံး DIY, သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဖြစ်ပါတယ် အိမ်လုပ်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာရာတိုင်း၏နေရာတွင်ရှိရမည်ဟုယုံကြည်သည်။
"စမ်းသပ်မှု" ၏အဓိပ္ပါယ်ကို အသုံးပြု၍ အိမ်တွင်းစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ရူပဗေဒဓာတုဗေဒနှင့်သဘာဝသိပ္ပံနယ်ပယ်အတွင်းသိပ္ပံနည်းကျဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်အခြေခံမူများကိုရှာဖွေရန်၊ အတည်ပြုရန်သို့မဟုတ်သရုပ်ပြရန်အတွက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်လိမ့်မည်။
ကျနော်တို့အားဖြင့် sorting နေကြသည် ကလေးများအတွက်စမ်းသပ်မှု။ အိုင်တီလွဲချော်မနေပါနဲ့
Updated 05/10/2018 Updated -> ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောအချက်များကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်စမ်းသပ်မှုကတ်ပြားအသစ်များကိုပြန်လည်ရေးသားပြီးစတင်ခဲ့သည်။ ပစ္စည်းများ၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ ပြီးစီးမှုအချိန်၊ ၎င်းကိုညွှန်ပြသောခေတ် (ဤကိစ္စတွင်ကလေးစိတ်ပညာရှင်သည်စမ်းသပ်မှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘာတွေလေ့လာသင်ယူ၊ ရှင်းပြနိုင်၊ နက်ရှိုင်းစေနိုင်သည်ကိုပါ
ဤအရာသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကလိမ္မော်ရောင်နှင့်ဆီအနည်းငယ်မျှသာသင်ကြားပေးခဲ့သည်။ အပေါ် Read
အဆိုပါတစ်ခုမှာ ရိုးရှင်းသောဒုံးပျံများ ထိတွေ့မှုရှိခြင်းနှင့်အနည်းငယ်တွေ့မြင်ရသည် ။-) ၎င်းသည် Aerosol အမျိုးအစားအချို့၊ deodorant သို့မဟုတ်အလားတူမှုန်ရေမွှားအချို့ကိုလောင်ကျွမ်းခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
ငါလုပ်မယ့်စာရင်းထဲမှာထည့်လိုက်ပြီ ငါလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်နေစဉ်ငါဗီဒီယိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုစွန့်ခွာ။ အလွန်ရိုးရှင်း။ နှင့်ငါတို့အဖြစ်မကြာမီငါတို့ပြုသကဲ့သို့, ငါတို့လုပ်တိုးတက်မှုနှင့်အတူချိတ်ဆွဲ ;-)
Infinity မှန်ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
ဒီနေ့မင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့လာတယ် အဆုံးမဲ့ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကိုဖန်တီးသော LEDs ဖြင့်မှန်ကိုမည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။ ၎င်းသည်အေးမြသော optical အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုသင်နှင့်မျှဝေလိုပါသည်။
သင်ပြသကြည့်ပါ အဆိုပါ Hormigueroသေချာတာပေါ့၊ လူထုံ။ ဒါက device ကို (နားကြပ်) ကြောင်း ထစ်စေခြင်း မင်းပြောတဲ့အတိုင်းမီလီစက္ကန့်အနည်းငယ်နှောင့်နှေးနေတဲ့သင့်အသံကိုကြားနိုင်ပါပြီ
ပုံသဏ္ဌာန် အိမ်လုပ်လူထွင်လုပ်ပါ ၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် DAF (Delayed Auditory Feedback) ကိုသာ download လုပ်ရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းကိုအတိအကျလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ပြောသောမီလီစက္ကန့်များနောက်ကျကာကျွန်ုပ်တို့၏စကားလုံးများကိုပြန်ပို့ပါ။
Distorter, ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းထဲမှာ Idiot
Hasbro ဂိမ်းတစ်ခုရှိတယ် ပုံပျက် ၎င်းသည်၎င်းကိုအတိအကျပြုလုပ်ပေးပြီးဆော့ဖ်ဝဲကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းထက်မိသားစုကစားခြင်းအတွက် ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ သင့်ကိုဝယ်ယူရေးလင့်ခ်ထားခဲ့ပါ
Windows အတွက် DAF
Windows အတွက် DAF / FAF လက်ထောက်
နှောင့်နှေးသည့်အာရုံတုန့်ပြန်ချက် - ၀ င်းဒိုးကွန်ပျူတာပေါ်ရှိ Stuttering -DAF
José Manuel Cano ကငါတို့ရဲ့ Facebook fanpage မှာထားလိုက်ပြီးလုပ်ထားတဲ့အိမ်လုပ်ဘက်ထရီ ... အပေါ် Read
အိမ်လုပ် rotomolding စက်တစ်ခုလုပ်နည်း
ငါလုပ်ဖို့ဘယ်လိုရှာဖွေနေခဲ့သည် အိမ်လုပ်ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးစက်။ ငါ့မှာအတွေးအမြင်တချို့ရှိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဟာအခြေခံကျကျတစ်ခုခုလိုအပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအင်တာနက်ပေါ်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာသိချင်တယ်။
ငါရှာတွေ့သည့်ဆေးထိုးစက်ကိုရှာဖွေသည် အိမ်မှာ rotomolding စက်အရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ် :)
သင်အားကစားလုပ်ပါသလား မလုပ်ပါနှင့်? ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုလုပ်သူ၊ အပြောက်အစင်းများ၊ အလွန်အကျွံတင်ခြင်းစသည်တို့စသည်တို့ကိုသင်သိပြီးသေချာသည်မှာအားကစားသည်ကောင်းမွန်သည်ဟုဆိုကြသည် ။-)
ရှည်လျားသောလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည်ဒူးခေါင်းနှင့်ပုံမှန်လုပ်ရန်လုပ်သောရေခဲဖြင့်အိမ်သို့ပြန်လာသည်။ အိမ်မှာငါရှိခဲ့တယ် အပူနှင့်အအေးဂျယ်လ် 3M တစ်အိတ် သို့သော်သင်လုပ်နိုင်လျှင်ဝယ်ရန်အဘယ်ကြောင့်လိုသနည်း။
Página1 Página2 ... Página8 အောက်ပါ →